Home » အသားပေး » #NABSHOWNY အဆိုပါဟု ICG ပြော Panel ကိုတင်ပြကိုသတိရနေတယ်မနေပါနဲ့: ဘယ်လို Unscripted ရုပ်မြင်သံကြား Multi-Cam Reinventing နေပါသည်!
အတော်များများကစက်မှုလုပ်ငန်းပညာရှင်များကျနော်တို့ Multi-ကင်မရာရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လုပ်နည်းလမ်းများလျှင်မြန်စွာတိုက်ရိုက်တီဗီများ၏ဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းအပေါ်ယနေ့ဖြစ်ကြောင်းနည်းစနစ်နှင့်အတူပြောင်းလဲနေတဲ့ထားပြီးအကြောင်း, သဘောတူသည်။ ပြန်လည်စစ်ဆင်ရေးများနှင့်နည်းပညာများကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာကတော့တက်ရောက်ရန်ဖြစ်ပါသည် NAB ပြရန် နယူးယောက်နှင့်နိုင်ငံတကာရိုက်ကူးရေးအစည်းအရုံး (ဟု ICG ပြော, IATSE ဒေသခံ 600) တင်ဆက်မှုကိုနားထောင် ဘယ်လို Unscripted ရုပ်မြင်သံကြား Multi-Cam Reinventing ဖြစ်ပါတယ် panel က။ ဤသည် In-depth panel ကဆွေးနွေးမှုအပေါ်ကျင်းပလိမ့်မည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, 17 မှာအောက်တိုဘာလ 2: 45 ထဲမှာ ယာကုပ် K. မှာပင်မခန်းမ Javits နယူးယောက်မြို့အောက်တိုဘာလ 17-18 အတွက်ရေးစင်တာ။ အဆိုပါ panel ကိုအပေါ်သူများသည်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်: ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ် Pearlman; ကင်မရာလုပ်ငန်းရှင်များ: ဆယ်လင်း Richholt, SoC နှင့် တွမ်သေတမ်းစာဤပညာရှင်များ Multi-ကင်မရာညျဘဏ်ဍာအမြင်အာရုံစီးဆင်းမှု၏ Re-တီထွင်မှုကိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
"ဟု ICG ပြောအဖွဲ့ဝင်များ unscripted အကြောင်းအရာ၏လျှင်မြန်စွာတိုးချဲ့ကမ္ဘာကိုအဓိကမျှဝေသူဖြစ်ကြပြီးကြှနျုပျတို့သညျဤအဖိုးတန် session တစ်ခုဖြစ်ပျက်ဖြစ်စေခြင်းငှါ NAB နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကျေနပ်ပါ။ " နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်စတီဗင်ပိုစတာ, ASC ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင်, ထိုနောက်ပိုင်းတွင်နေ့ရက်ကာလ၌အော်ပရေတာမမေ့မလြော့ပါ ဂျက်ဖ် Muhlstock, SoC နှင့် Todd Armitage, SoC ၏ SoC panel ကဆွေးနွေးမှုအတွင်း operating ကင်မရာ၏အနုပညာဆွေးနွေးကြမည် Sneaky Pete များ၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။ အဖြစ်အောက်ပါနေ့, ဆယ်လင်း Richholt ကကမကထပြုတဲ့ panel ကသူမ၏ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုမျှဝေပါလိမ့်မည် #GALSNGEAR အရာထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အမြိုးသမီးမြားကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့တံဆိပ်နှင့်တက်ရောက်ရန်ကြိုတင်ယူထားရန်သေချာစေပါ #NABSHOWNY ယင်း၏မဟုတ်နှောင်းပိုင်းတွင်ပါ! ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်ပါ: www.nabshowny.com/conference/postproduction-conference-nyc
နိုင်ငံတကာရိုက်ကူးရေး Guilds (ICG) about:
နိုင်ငံတကာရိုက်ကူးရေးအစည်းအရုံး (IATSE ဒေသခံ 600) ဓာတ်ပုံ, ကင်မရာအော်ပရေတာ, အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုကြီးကြပ်ရေးမှူး, ဆဲဓာတ်ပုံဆရာ, ကင်မရာလက်ထောက်, ရုပ်ရှင် loader, ကင်မရာသမားတွေအပေါငျးတို့သအဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဟု ICG ပြော၏ဒါရိုက်တာအဖြစ်ရုပ်ရှင်, ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ကြော်ငြာမှာအလုပ်မလုပ်တဲ့သူ 8,500 အဖွဲ့ဝင်များကထက်ပိုမိုကိုယ်စားပြု publicists ။ ပထမဦးဆုံးအရိုက်ကူးရေးပြည်ထောင်စုအတွက်သမဂ္ဂများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, 1926 အတွက် New York မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ် Los Angeles မြို့ နှင့်ချီကာဂို, ဒါပေမယ့်ဒေသခံ 1996 အမျိုးသားရေး Guild အဖြစ်မွေးဖွားခဲ့သည်ကြောင်း 600 သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ ICG ၏ဖြစ်ပွားနေသောလှုပ်ရှားမှုများအရေးပေါ်ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ဆုပေးပွဲနှင့်ဟု ICG ပြော Publicists ဆုပေးပွဲနေ့လယ်စာစားပွဲပါဝင်သည်။ အဆိုပါအစည်းအရုံးကိုလည်းဆုရဟု ICG ပြောမဂ္ဂဇင်းထုတ်ဝေ www.icgmagazine.com
2016 NAB ပြရန် 2016 NAB Show ကိုယောဘသည်တရားမျှတသော 2016 NAB ပြရန်သတင်းများ ထုတ်လွှင့် Beat ဆုပေးပွဲ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း NAB 2015 NAB 2016 NAB ပြရန် Show ကို 2016 NAB NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB16 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး post ကိုထုတ်လုပ်မှု Post ကိုထုတ်လုပ်မှုကမ္ဘာ့ဖလား sprockit	2018-10-15
ယခင်: Facilis NAB နယူးယော့ 2018 မှာနောက်ဆုံးရ Shared File System Advanced ခင်းကျင်းပြပေးပါရန်